Star Trek Beyond (2016) | MM Movie Store
ကနဦးစှာ ကြှနျတျောပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဝနျခံပါရစေ။ Director Justin Lin တဈယောကျ ဒီဇာတျကားကို ရိုကျမယျလို့ကွားသိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျောအလှနျစိတျပကျြမိခဲ့တယျ။ Fast and Furious ကောငျက ကိုယျတှကွေိုကျတဲ့ Star Trek ကိုဖကျြဆီးပဈလိုကျမယျဆိုတဲ့ စိုးရိမျစိတျနဲ့ပေါ့။
အခုလိုပွောလိုကျလို့စာဖတျသူတို့ဘာမှ စိတျမပူပါနဲ့။ တဈကယျတော့ ဒီဇာတျကားဟာ တဈကယျကို ကောငျးမှနျတဲ့ Star Trek ဇာတျကားကောငျးတဈကားအဖွဈ ယခုဆို ရပျတညျနိုငျခဲ့ပွီလေ။
တဈကားလုံးကို ခွုံပွောရမယျဆိုရငျ Actions တှေ၊ Actions တှေ အရမျးမြားလှနျးတယျ။ တဈကားလုံးကို ဇာတျလမျးထကျ Actions တှကေ မြားလှနျးတော့ တဈခါတဈခါ အာရုံကိုမနညျးပွနျဖမျးရတယျ။ သို့သျော Star Trek ရဲ့ပုံပနျးထဲကတော့ ထှကျမသှားခဲ့ပါဘူး။
Star Trek ရဲ့ဇာတျကားတဈကားဆိုတဲ့အတိုငျး Star Trek ခံစားခကျြကိုတော့ ရနပေါသေးတယျ။ ဒါဟာ Justin Lin ကို ခြီးကြူးရမှာ ဖွဈတယျ။ သူ ကြှမျးကငျြတဲ့ Action ခနျးတှကေို ပရိသတျသဘောကအြောငျ ထညျ့နိုငျခဲ့သလို Star Trek theme ထဲကနလေညျး ထှကျမသှားစရေအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာပဲ။
Justin Lin ကို သရုပျဆောငျတှရေဲ့ပွောခကျြအရဆိုရငျ ပို၍ စဉျးစားတှေးချေါတတျတဲ့ Director တဲ့။ ဒီလို ပွောကွလို့J.J. Abrams ကို စဉျးစားဉာဏျမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတျဘူး။
J.J. Abrams က ရိုကျကှငျးမှာ လူတိုငျးကို အားတကျအောငျ အမွဲပွုလုပျလရှေိ့ပွီး Justin Lin ကတော့ စကားနညျးကာ ပိုမိုအသေးစိပျဆနျတယျဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။Star Trek နဲ့ပတျသကျပွီး လလေ့ာခကျြအရ Star Trek ဇာတျလမျးတှဲတှေ စထှကျတဲ့အခြိနျတုနျးက ပွောခငျြတဲ့ Messages တှကေ လူမြိုးရေးခှဲခွားခွငျးတှနေဲ့လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ဖိုမ ခှဲခွားခွငျးတှကေို တှနျးလှနျပဈဖို့ပဲ။
ပွီးတော့ ငွိမျးခမျြးရေးကို လိုလားခွငျးကို တငျပွထားပွီး ဇာတျလမျးရဲ့ဖှဲ့စညျးထားပုံဟာ Democary ထကျ Socialism ကို ပိုမိုရောကျတယျလို့မွငျမိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သခြောစှာ တှေးကွညျ့လာရငျတော့ Individulisim လို့ပွောရငျ ပိုမိုမှနျကနျပါလိမျ့မယျ။
အကယျ၍ ကြှနျတျောတို့ကမ်ဘာပျေါကလူသားတှဟော မိမိတဈကမ်ဘာထဲမှာ ရှိတဲ့တဈခွားလူမြိုးခွားတှနေဲ့တောငျ စဈဖွဈနပွေီး ခှဲခွားနရေငျ တဈခွားဂွိုလျက သကျရှိလူသားတှနေဲ့ (တဈခွားကမ်ဘာမြားတှငျ အသိဉာဏျရှိ သကျရှိမြားရှိလြှငျ) မညျကဲ့သို့ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျကွီး ဖျောဆောငျနိုငျမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးရဲ့အဖွကေို Star Trek ဟာ ဖွကွေားလာခဲ့တာ ယခုဆိုရငျ နှဈ 50 တောငျ ပွညျ့ခဲ့ပွီပေါ့။
ကြှနျတျောတို့ကမ်ဘာကဉျြးကဉျြးလေးထဲမှာ ဘာကွောငျ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ မုနျးတီးစိတျတှနေဲ့တိုကျခိုကျနကွေတာလဲ။ ဘာကွောငျ့ ဖိုမ ဆိုပွီး နရောတိုငျးမှာ ခှဲခွားနကွေရတာလဲ။ ဘာကွောငျ့ ကိုယျအရပွေားပျေါက အသားအရောငျကို ကွညျ့ပွီး ခှဲခွားပွောဆို ဆကျဆံနကွေတာလဲ။
အကယျ၍ အကယျ၍ ပေါ့။ တဈခွားကမ်ဘာက လူသားတှကေို စတငျတှရှေိ့လာတဲ့တဈနကြေှ့နျတျောတို့ကမ်ဘာက လူသားတှေ ထိုစရိုကျတှကေို ဘယျလိုပွောငျးလဲကွတော့မှာလဲ။ ကွညျ့ကွတာပေါ့ဗြာ ….
ကနဦးစွာ ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံပါရစေ။ Director Justin Lin တစ်ယောက် ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်မယ်လို့ကြားသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အလွန်စိတ်ပျက်မိခဲ့တယ်။ Fast and Furious ကောင်က ကိုယ်တွေကြိုက်တဲ့ Star Trek ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပေါ့။
အခုလိုပြောလိုက်လို့စာဖတ်သူတို့ဘာမှ စိတ်မပူပါနဲ့။ တစ်ကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ တစ်ကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ Star Trek ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားအဖြစ် ယခုဆို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။
တစ်ကားလုံးကို ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် Actions တွေ၊ Actions တွေ အရမ်းများလွန်းတယ်။ တစ်ကားလုံးကို ဇာတ်လမ်းထက် Actions တွေက များလွန်းတော့ တစ်ခါတစ်ခါ အာရုံကိုမနည်းပြန်ဖမ်းရတယ်။ သို့သော် Star Trek ရဲ့ပုံပန်းထဲကတော့ ထွက်မသွားခဲ့ပါဘူး။
Star Trek ရဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဆိုတဲ့အတိုင်း Star Trek ခံစားချက်ကိုတော့ ရနေပါသေးတယ်။ ဒါဟာ Justin Lin ကို ချီးကျူးရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Action ခန်းတွေကို ပရိသတ်သဘောကျအောင် ထည့်နိုင်ခဲ့သလို Star Trek theme ထဲကနေလည်း ထွက်မသွားစေရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲ။
Justin Lin ကို သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ပြောချက်အရဆိုရင် ပို၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ Director တဲ့။ ဒီလို ပြောကြလို့J.J. Abrams ကို စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။
J.J. Abrams က ရိုက်ကွင်းမှာ လူတိုင်းကို အားတက်အောင် အမြဲပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး Justin Lin ကတော့ စကားနည်းကာ ပိုမိုအသေးစိပ်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။Star Trek နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချက်အရ Star Trek ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ စထွက်တဲ့အချိန်တုန်းက ပြောချင်တဲ့ Messages တွေက လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိုမ ခွဲခြားခြင်းတွေကို တွန်းလှန်ပစ်ဖို့ပဲ။
ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားခြင်းကို တင်ပြထားပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံဟာ Democary ထက် Socialism ကို ပိုမိုရောက်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာစွာ တွေးကြည့်လာရင်တော့ Individulisim လို့ပြောရင် ပိုမိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်ကလူသားတွေဟာ မိမိတစ်ကမ္ဘာထဲမှာ ရှိတဲ့တစ်ခြားလူမျိုးခြားတွေနဲ့တောင် စစ်ဖြစ်နေပြီး ခွဲခြားနေရင် တစ်ခြားဂြိုလ်က သက်ရှိလူသားတွေနဲ့ (တစ်ခြားကမ္ဘာများတွင် အသိဉာဏ်ရှိ သက်ရှိများရှိလျှင်) မည်ကဲ့သို့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ဖော်ဆောင်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို Star Trek ဟာ ဖြေကြားလာခဲ့တာ ယခုဆိုရင် နှစ် 50 တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဘာကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မုန်းတီးစိတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာလဲ။ ဘာကြောင့် ဖိုမ ဆိုပြီး နေရာတိုင်းမှာ ခွဲခြားနေကြရတာလဲ။ ဘာကြောင့် ကိုယ်အရေပြားပေါ်က အသားအရောင်ကို ကြည့်ပြီး ခွဲခြားပြောဆို ဆက်ဆံနေကြတာလဲ။
အကယ်၍ အကယ်၍ ပေါ့။ တစ်ခြားကမ္ဘာက လူသားတွေကို စတင်တွေ့ရှိလာတဲ့တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာက လူသားတွေ ထိုစရိုက်တွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြတော့မှာလဲ။ ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ ….